प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा अश्लील सामग्री, कसले गर्यो दुरुपयोग ? « Deshko News
प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा अश्लील सामग्री, कसले गर्यो दुरुपयोग ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नामबाट खोलिएको वेबसाइट दुरुपयोग भएको छ। उक्त साइटमा ‘पोर्न’ भिडियो कहाँबाट कसले अपलोड गर्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन। केपीशर्माओली डटकम ९पउकजबचmबयष्।िअयm०मा अश्लील सामग्री राखिएकोबारे सरकारले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको वेबसाइट लामो समयदेखि दुरुपयोग भएको पाइएको छ। सरकारले दुई वर्षअघि पोर्न साइटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै नामको डोमेनमा भने सयौं पोर्न भिडियो अपलोड भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अली प्रधानमन्त्रीका नाममा डोमेन दर्ता गरेर कसैले दुरुपयोग गरेको स्वीकार गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीका नाममा डोमेन दर्ता गरेर गलत काम गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ। यस विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘डटएनपी भए हामी सिधै बन्द गर्न सक्थ्यौं तर डटकम भएकाले सम्भव छैन।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ असोज ६ गते यौनजन्य सामग्री आदानप्रदान, प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाएको थियो। उक्त निर्णयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता वेबसाइटलाई तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२१ ले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको छ।
यो डोमेन साधारण व्यक्तिको नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा छ। यो वेबसाइटमा पोर्न भिडियो अपलोड हुँदा प्रधानमन्त्रीसँगै देशकै बदनाम भइरहेको छ। ‘नेपालभित्र इन्टरनेटप्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरी बन्द गर्न सकिन्छ’, आईटी कम्पनी सञ्चालक टुरुप संग्रौला भन्छन्, ‘यो वेबसाइटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बदनाम भइरहेको छ। छेङदु वेस्ट डाइमेन्सन डिजिटल टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गरेर यसको डोमेन फिर्ता लियो भने दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीकै नाम दुरुपयोग भएर दर्ता भएको अर्को वेबसाइटको डोमेन १२ मार्च २०१८ पछि गलत ढंगले प्रयोग भएको पाइएको छ। ओलीका नामको डोमेनमा सन् २०१८ पछि विभिन्न पोर्न भिडियो अपलोड भएका छन्। शीर्ष नेताको व्यक्तिगत डोमेन दुरुपयोग भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन। यसअघि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, युवा नेता गगन थापा, नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका डोमेन दुरुपयोग भएका थिए। डोमेन दर्ता गरेर लामो समय अपडेट नगर्दा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ। अन्नपूर्ण दैनिक